Fepetra takiana amin'ny fanoratana: Inona avy ireo? - Fiofanana kognitive
Ianao izao: Home » Articles » DSA » Fepetra takiana amin'ny fanoratana: Inona avy ireo?
Ao amin'ny tontolon'ny fitsaboana ny lesoka amin'ny fianarana manokana, anjara asa manokana no andraikitr'ireo antsoina hoe prerequisites. Ny fepetra takiana mialoha dia fahaizana na fahalalana manampy antsika hampivelatra fahaizana na fahalalana vaovao avy eo. Nahoana no zava-dehibe ny mamantatra ny fepetra takiana mialoha? Satria mamela antsika hiasa alohan'ny hisehoan'ny fahaiza-manao iray izy io, ka hanome fotoana bebe kokoa antsika ary angamba mety hahomby kokoa. Andao hieritreritra ohatra Famakiana: ny mety hiasa amin'ny zavatra hafa ankoatry ny famakiana, ma izay manampy antsika hanatsara ny fivelaran'ny famakiana, mamela antsika hiditra an-tsehatra sahady amin'ny akaninjaza.
Mampalahelo fa matetika, ireo izay amidy ho prerequisites dia matetika "ihany", raha ny fijerin'ny fikarohana, predictors. Amin'ny fampiharana, izy ireo dia fahaiza-manao mifandraika amin'ny statistika amin'ny fahaiza-manao manaraka, ary noho izany dia azo ampiasaina hananganana hevi-diso momba ny fivoaran'ny fahaiza-manao iray na tsia. Mbola amin'ny resaka famakiana, ny antokom-pivavahana haingana heverina ho mpaminavina tsara ny famakiana izany: amin'ny fijerena ny fahaizan'ny ankizy manonona anarana haingana dia azoko atao ny manombatombana ny fahaizan'izy ireo mamaky manaraka tsara. Na izany aza, ny fanatsarana ny anarana haingana dia mety tsy voatery hanatsara ny famakiana!
Ao amin'ny lahatsoratra 2011 izay azonao atao ny maka hevitra malalaka eto, Purakin sy ireo mpiara-miasa  dia nanandrana namantatra ireo fahaiza-manao afaka maminavina ny fahaizany manoratra aorian'ny fiandohan'ny akaninjaza. Manadihady manokana izy ireo:
Fahalalana ny abidia: fanondroana litera na fanondroana teny manomboka amin'ny ...
Fahaiza-manao metapisolojika: fizarana fusion sy syababika
Fahalalana ny "dikan'ny" fanoratana (fahalalana printy): anaran'ny marika vokatra, inona no ilana ny fanoratana, inona no ilana gazety, sns.
Manoratra ny anaranao
Manoratra teny litera 3 (CVC toy ny "alika", "saka")
Momba ny fanoratana ny anarana dia nanandrana nitady ihany ireo mpanoratra ireo fifandraisana misy eo amin'ny halavan'ny anaran'ny zaza sy ny fahaizany manoratra: Amin'ny fehin-kevitr'izy ireo, satria mianatra manoratra mialoha ny anarany manokana ny ankizy, ny ankizy manana anarana lava kokoa dia mety hahalala litera bebe kokoa, ary noho izany dia tsara kokoa amin'ny fanoratana. Ny fandinihana anefa tsy nanamafy an'io hypothèse io.
Ny fandinihana dia nahitana fa ny antony roa manampy indrindra amin'ny faminavina ny fahaizany manoratra manaraka dia:
Ny fahalalana ny "dikan'ny" fanoratana
Ny fahaizana manoratra taratasy
Toa hafahafa izany, saingy toa tsy mitana andraikitra lehibe toy izany ny fanoharana. Mety toa tsy mifanaraka amin'ny laoniny izany, raha jerena fa ny fanoratana dia azo atao farafaharatsiny amin'ny fizarana ilay teny nadika hoe grapheme tamin'ny grapheme. Na izany aza, na ny fandalinana italianina aza dia manamafy ny andraikitra tsy ivon'ny singa metaphonological.
Amin'ity lafiny ity, manoro hevitra ny lahatsoratray izahay amin'ny ankizy miteny ratsy, fa manorata tsara.
GameCenter Writing: ny fampiharana an-tranonkala fanoratana maimaimpoana
Ny fianarantsika horonantsary tsy mifanaraka "Ny fanamafisana ny fanoratana" (65 €)
Inona ny dysorthography
Ny takelaka misy antsika maimaimpoana amin'ny famakiana, fanoratana, fikajiana, fiteny, fiheverana ary ireo asany mpanatanteraka
 Puranik, Cynthia & Lonigan, Christopher & Kim, Young-Suk. (2011). Fandraisana anjara amin'ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra ho an'ny fanoratana anarana, fanoratana taratasy ary ny tsipelina ao amin'ny ankizy preschool. Fikarohana momba ny fahazazana isaky ny telo volana. 26, 465-474.
dysorthography, fanazaran-tsipelina, metaphonology, fepetra takiana amin'ny metaphonology, fepetra fanoratana
Fepetra takiana amin'ny fanoratana: Inona avy ireo?2020-11-042020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/journal-2850091_1280.jpg200px200px
Fanomezana hery: fampianarana an-tserasera tsy misy ifandraisany amin'ny tsipelinaDSA